Vaky fasana teto Antananarivo Mpangalatra taolam-paty 8 voasambotra
Nandritra ny fanadihadian’ny zandary tamin’ireo mpamaky fasana tany Ambohibary Manjakandriana no nahalalana fa izy ireo no namaky ny fasana maro manodidina an'Antananarivo sy Manjakandrina, Andriampamaky, Talatavolonondry,
Ambohimangarova Avaratra, Antsefahy, Andoharanofotsy, Ankadivoribe, Ambohibary ary Antsirabe sy ny maro hafa. Tsahivina fa ny alatsinainy 3 jona tamin’ny valo ora alina dia naharay tatitra ny zandary tao Manjakandriana fa misy olona mihaodihaody eny Ambohibary. Ny ampitso maraina tamin’ny 8 ora dia nisy nahatsikaritra olona roa nampiahiahy ka niantso ny zandary. Tratra teo Bevava ireo lehilahy roa nikasa ny hihazo an'Antananarivo. Rehefa nosavaina izy ireo dia nikasa ny hamoaka antsy tao anaty sakaosy. Nosamborina ka tra-tehaka ny fitaovana vy maromaro sy “barre-pince, barre mine” ary vola tsangan'olona izay famakiany fasana. Ny talata 4 jona, nitatitra ny olona tao Ambohibary fa nisy fasana roa vaky ka niaiky izy roalahy ho nanatanteraka izany. Nosavaina ny tranon'izy ireo ka nisy olona iray hafa ihany koa mpiray tsikombakomba. Rehefa nohadihadiana io, nilaza anaran’olona roa hafa koa izay namany. Rehefa nampahafantarina an'ireo roalahy voalohany izany dia nanamafy izy ireo fa efa npiaraka taminy daholo ireo, ary mbola nanonona olona roa hafa ihany koa izy. Efa natolotra ny fitsarana ireo olona ireo ary naiditra am-ponja vonjimaika avokoa. Mbola andrasana hatreto ny ilana ny taolam-paty.